less than 100,000 Archives - Glory Assumption Space
Salary Range ( less than 100,000 )
1. Chinese Translator (Sales) – M/F (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ရန်ကင်း မြို့ နယ်။
Salary Rang : less than 100,000
1. Chinese Translator (Sales) – M/F (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ရန်ကင်း မြို့ နယ်။ - Chinese Translator လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Chinese4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - English ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည်။ - We Chat ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိရမည်။ - ဘွဲ့ ရ ဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:00PM), တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ -ရန်ကင်း မြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်း မြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09 262223785, 09 262223784, 09-263121101 Viber Phone Number –09262223784 , 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
1. Chinese Translator (Purchaser) – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တာမွေ မြို့ နယ်။
1. Chinese Translator (Purchaser) – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တာမွေ မြို့ နယ်။ - Chinese Translator လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၀ မှ ၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - Chinese4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည်။ - စာချုပ် (၂) နှစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရမည်။ - Oversea သွားရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အဝယ်ပိုင်းဖြစ်၍ Fashion အမြင်ရှိပြီး အရောင်းအဝယ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - ဘွဲ့ ရ (သို့ ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:00PM), တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - တာမွေ မြို့ နယ်ရှိ Fashion Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေ မြို့ နယ်ရှိ Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09 262223785, 09 262223784, 09-263121101 Viber Phone Number –09262223784 , 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sale Staff Female
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျုး (၁)ပတ်အတွင်းဝင်ရမည်။ 1.Sale Staff Female -(50)Posts - အထက်တန်းအောင်ြပီးသူများ လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။ -အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - အသက် ၂၅နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။ - (၃)နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။